उत्पाद नाम स्टेनलेस स्टील कोहनी
उत्पतिस्थान गुआंग्डोंग, चीन(मुख्यभूमि)
मानक AISI, ASTHMA, IN, जीबी
प्रमाणपत्र आईएसओ TUV LRQA
आकार 1/2"-१२" / DN15-DN300 वा अनुकूलित
मोटाई 1.5-4मिमी वा अनुकूलित
प्रक्रिया विधि Forge Processing,Advance CNC Machine
समाप्त गर्दै A:santin B:400#-600# ऐना C:म्याट
आपूर्ति क्षमता 100Ton/Tons per day
सामग्री C र Mn पी S सीआर नी
201 ≤0.12 ≤0.75 ≤ .5 ..5-१२.२ ≤0.045 ≤०.०3 13-16 0.8-1.5
304 ≤०.०8 ≤0.75 .२.० ≤0.045 ≤०.०3 18-19 8-10
316L ≤०.०8 ≤1.00 .२.० .00.035 ≤०.०3 10-14 16.0-18.5
ह्यान्ड्रिल वा ट्यूब फिटिंग को सजावट सामान को लागी प्रयोग गरीन्छ
हाम्रो कम्पनी, Foshan Jinsuiying स्टेनलेस स्टील सामग्री कं, लिमिटेड, जनवरी मा स्थापित भएको थियो,2004. यो त्यस्तो कम्पनी हो जुनसँग आफ्नै कारखाना छ र स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइपको निर्माणमा विशेषज्ञता आयत पाइपहरू सहित।, वर्ग आकार पाइप र राउन्ड पाइपहरू विभिन्न आकारका साथ. And we also manufacture stainless steel sheets and accessories. क्षेत्र कभर गर्दै 20 एकर, हाम्रो कारखाना नम्बर 89,, वेस्ट गामिंग एवेन्यूमा अवस्थित छ, मिingचेng टाउन, गामिंग जिल्ला, Foshan शहर, गुआंग्डोंग प्रान्त. प्रत्येक महिना हाम्रो कारखाना उत्पादन गर्न सक्छन् 5000 लाई 6000 टन्न पाइप.
हाम्रो कम्पनी को स्थापना पछि, we have been making efforts to produce the products that customers are satisfied with. हाम्रो कम्पनी राम्रो प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दछ र TUV जस्ता प्राधिकृत औद्योगिक समितिहरु द्वारा जारी धेरै प्रमाणपत्रहरु बाट सम्मानित गरिएको छ, LRQA，ASTHMA,I,आदि. यदि सम्भव छ भने, हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं पनि हाम्रो ग्राहकहरू मध्ये एक हुन सक्नुहुनेछ जुन हामीसँग दीर्घकालीन व्यापार सहयोग छ.
प्याकेजिंग विवरणहरू wrapped inawooden carton or paper box
Delivery Time 20-25जम्मा भएको रसिद पछि दिनहरू
Advantanges समुद्री;Easy to unload
पोर्ट GAOMING; NANSHA;Or As Requested
Q: तपाईं एक ट्रेडिंग कम्पनी वा निर्माता हुनुहुन्छ?
A: हामी स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइपको एक पेशेवर निर्माता हो. Foshan मा स्थापित,चीन भित्र 2004, हाम्रो कारखानाको ती उत्पादनमा धेरै अनुभव छ.
Q: के तपाईं मलाई नमूनाहरू प्रदान गर्नुहुन्छ मद्दत गर्नु अघि मेरो गुणवत्ता जाँच गर्न?
A: अवश्य, तर तपाईंले भाडा तिर्नु पर्छ.
Q: तपाईंको फ्याक्ट्री उत्पादन दायरा के हो??
A: हामी राउन्ड पाइप लगायत स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइपको निर्माणमा माहिर छौं,square pipes, rectangle pipes, slotted pipes and
Q: म तपाइँसँग कसरी अर्डर गर्दछु?
A: कृपया हामीलाई तपाईंको खरीद आदेश पठाउनुहोस् वा ईमेल द्वारा विशिष्ट सोधपुछ, Wechat, वा व्हाट्सएप. त्यसो भए प्रोफार्मा इनभ्वाइस तपाइँको आवश्यकता अनुसार तपाइँलाई फिर्ता पठाइनेछ. यहाँ आवश्यक छ कि जानकारी छ:
1. उत्पादन जानकारी: सामग्री सहित विशिष्टता, बाहिरी व्यास, मोटाई, लम्बाइ. टुक्राहरू तपाईले प्रत्येक विनिर्देशन वा पाइपको वजनको लागि चाहानुहुन्छ
2. वितरण समय & प्याकिंग आवश्यकता;
3. शिपिंग जानकारी: कम्पनीको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, गन्तव्य पोर्ट;
भित्र जवाफ दिनुहोस् 24 घण्टा:
सुसान जू: सेल: +86-13690200006
ट्यागहरू：स्टेनलेस स्टील सामान